Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Italiantali Alessandro Bastoni Storymụaka Akụkọ Ngwakọta Eziokwu Untold Biography
Isiokwu anyị na-enye gị nkọwa zuru oke nke Alessandro Bastoni Childhood Story, Biography, Family, Parents, Early Life, Life love, Personal Life and Web Life.
Ọ bụ nyocha zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwa ọhụrụ ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Mmalite Ndụ na Mbili nke Alessandro Bastoni.
Ee, mụ na gị ma na ọ nọ n’etiti ndị a umuaka ndi kachasi nma na Europe, onye tinyegoro otutu ihe nzuzo n’agha agha ya.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole hụrụ egwuregwu bọọlụ n'anya tụlere ịgụ akwụkwọ akụkọ Alessandro Bastoni, nke bụ ihe ịtụnanya. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Alessandro Bastoni Akụkọ Childmụaka:
Na mbu, aha otutu ya bu “Mba“. A mụrụ azụ-ụkwụ ụkwụ aka ekpe na 13th ụbọchị nke Eprel 1999, nna ya, Nicola Bastoni, na obere nne a ma ama, na Casalmaggiore, Comune dị na Italy nke dị na mpaghara Cremona, Lombardy.
Alessandro Bastoni mụrụ dị ka nwa nke abụọ, n'ime ezinụlọ dị nso nke 5. N'ime ọnwa ndị mbụ nke ndụ ya, football abụrụlarị isi ihe nke ndụ ya. Ọbụna tupu a mụọ ya, bọl bụrịrị akụkụ nke DNA ezinụlọ ya.
Dika nwatakiri, Ale mere ihe di ebube nke eweputara na nwata obula nke ya. Ná mmalite (ihe dị ka otu afọ), nwatakịrị ahụ na-akparịta ụka na Serie A.
Baby Alessandro nwere obi ụtọ iburu n'isi ma na-akpọ aha ndị a ma ama na Serie A nke na-atọ mama ya, nna ya na onye ọ bụla nọ n'ụlọ ya ụtọ.
Nke a bụ otu n'ime oge mbụ nke Foto Alessandro Bastoni's Childhood.
Dabere na Italian Gianlucadimarzio, Alessandro buru ụzọ kpọọ aha ndị egwuregwu bọọlụ nke Serie A n'ihu nwanyị ahụ buru ụzọ mụọ ya. N'okwu ya:
“Onye na-elekọta m, Rosaria na-edegharị ihe otu ụbọchị, m wee nyefee ya album ahụ nwere akwụkwọ mmado nke ndị egwuregwu Serie A, otu otu. O juru ya anya na m gwara ya aha ndị egwuregwu niile, tinyere mba ha n'isi. ”
Dabere na weebụsaịtị Italian Numero-Diez, Alessandro mụtara ịgụ na ide site na bọọlụ.
Na-ekiri egwuregwu mbụ ya, nwa ewu ahụ kpọpụtara ịkpọ aha ndị ama egwuregwu na akwụkwọ ozi na okwu ndị pụtara na eserese nke telivishọn ezinụlọ ya.
Amamihe a dị ịrịba ama bụ ihe na-egosi ọdịnihu na ọdịnihu Ale. Icheta aha ndị na-agba ụkwụ ụkwụ bụ n'ezie oge echefu echefu n'oge ọ bụ nwata.
Alessandro Bastoni Nzụlite, Nmalite na N'afọ Ndị Mbụ:
Nke mbu, onye na-agbachitere 6 ụkwụ 3 na-esite na ụlọ na-akwado Inter Milan. N'ikwu nke a, ezinụlọ Alessandro Bastoni bụ ndị na-agba ọsọ.
You nna nna ha, bụ Nicola, bụbu onye ọkpụkpọ Inter Milan mgbe mama ya nwere ike ịbụ onye na-elekọta ụlọ.
Site na mmalite, ndị nne na nna Alessandro Bastoni na-elekọta ezinụlọ na-elekọta football. Ha bụ ndị ahụ na-enweghị nsogbu ụmụ ha nwoke na-etinye obere agụmakwụkwọ maka ọrụ na bọọlụ.
Site n'oge mbụ, Nicola Bastoni kụziiri ụmụ ya omenala Nerazzurri.
Ezigbo Alessandro Bastoni anyị toro na Casalmaggiore, ya na ụmụnne ya, otu nwa agbọghọ aha ya bụ Michela na nwanne nwoke okenye aha ya bụ Luca Bastoni.
Brothersmụnna nwoke abụọ (Ale na Luca) dị ka ezigbo ndị enyi, bụ ndị hụrụ ibe ha n'anya n'oge ha bụ nwata.
Ndị na-agba ọsọ bọọlụ toro n'akụkụ nwanne ya nwoke nke okenye aha ya bụ Luca.
Alessandro Bastoni Mmụta- Nrọ nke Nna:
Nicola Bastoni nwere oge siri ike ịnagide ezumike nká. Nna nwere nlezianya chepụtara atụmatụ, nke ga-ahụ ka ụmụ ya nwoke ga-anọgide na-ebi ndụ nrọ nke ezinụlọ Bastoni.
You maara? Was Ọ bụ Luca Bastoni (Ale nwanne nwoke nwoke) malitere izizi ịgba bọl.
Ná mmalite, ndị nne na nna Alessandro Bastoni kwadoro ụmụ ha nwoke (Luca na Ale) ịga ụlọ akwụkwọ nwa oge ka ha wee nwee ike, ma ọ dịkarịa ala, nweta diplọma ma ọ bụrụ na football anaghị arụ ọrụ.
Onye na-agbachitere ahụ sonyere n'ụlọ akwụkwọ nkeonwe na Mantua naanị na Mọnde na Mọnde ọ bụla mgbe bọọlụ weghaara ụbọchị ndị ọzọ n'izu.
Alessandro Bastoni Bio - Ndụ mbido na football:
Allesandro Bastoni kwetara n'otu oge na ọ nwere mmasị na football site na nna ya na nwanne ya nwoke nke okenye, Luca. Laa azụ n'oge ahụ, Ale mepụtara omume nke iso nwanne ya nwoke okenye soro ndị enyi gbagoro agbago bọọlụ.
Afọ Mbụ nke Bmụnna Bastoni.
Eziokwu ahụ bụ na kpakpando ọdịnihu nwere ike ịsọ mpi na ụmụaka mere agadi mere ka o tozuo eto karịa ọsọ karịa mmadụ niile.
Mgbe ọ na-egwuri egwu maka obere otu akpọrọ Cannatese, Ale, onye dị afọ isii chọrọ itinye akwa No6.
Nwatakịrị, n'adịghị ka ndị ọzọ, nwere ike ịhụ bọọlụ bọọlụ kpọrọ ya. Mgbe ọ dị obere, ọ malitere inwe ekele maka ịma mma nrọ ya.
Ndị na-eto eto na-eto eto n'oge ọ bụ nwata, hụrụ ọdịnihu ya na-akpọ ya.
You maara? …Mụ nwoke niile nke ezinụlọ Allesandro Bastoni nwere ihe jikọrọ ya na Cannatese, otu ndị otu agbata obi ha.
Nna Bastoni "Nicola" bụ onye nchịkwa nke klọb na-eto eto, na ụmụ ya nwoke abụọ so na ndị egwuregwu ya.
Alessandro Bastoni Biography - Ndụ Ndụ Mmalite:
Ọụ nke ndị nne na nna Alessandro Bastoni amachaghị mgbe nwa ha nwoke nke ọdụdụ kpọkuru maka ule site n'Atlanta. Mgbe ọ dị afọ 7, Ale nwere ọchichị sonyeere alaka ụlọ ọrụ ntorobịa ka emechara ya ikpe.
N'oge ahụ na ọbụna ugbu a, Atlanta abụwo ụlọ ọgbakọ mara aha maka ịchọta na ịzụlite talent.
Dị ka a tụrụ anya na ọrụ mmalite ya, Bastoni nwere ezi obi nwere ọganihu site na ọgbọ ha. N'oge na-adịghị anya, ọ guzobere onwe ya dị ka ọkacha mmasị na etiti nchebe.
Alessandro Bastoni sere na mmalite afọ ya na Atalanta BC
N'ịghọta ọchịchọ ya inwe ihe ịga nke ọma, onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ Allesandro Bastoni kwadoro ya n'ụzọ nke ha.
N'oge ahụ, Nicola ga-ebugharị ndị ezinụlọ ya ihe dịka 100 kilomita na Zingonia (ugboro atọ n'izu) iji hụ nwa ya nwoke. N'oge ndị ọzọ, nna dị mpako ga-ahazi obere ọrụ.
Nleta ezinụlọ na mkpali mere ka ndị ntorobịa rụzuru. Ndị nne na nna Allesandro Bastoni nwere obi ụtọ ịhụ ka nwa ha na-enyere ndị otu ya aka iji merie National Under-17 Championship, n'okpuru 17 Super cup, iko Arco na egwuregwu ndị ntorobịa Atlanta na afọ 2015 na 2016.
Alessandro Bastoni Biography - Roadzọ a ma ama Akụkọ:
Iji mee ka ezinụlọ nwee ọ joyụ, onye na-agbachitere ya na-egbu maramara, na afọ 2016 gụsịrị akwụkwọ ọta akara Bergamo nwere agba na-efe efe. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ ntorobịa, Ale malitere ọrụ nke imere onwe ya aha.
Laa azụ n'oge (2016-2017 oge), Atalanta BC malitere malitere ewu ewu. Ọ bụ ezie na ndị amasị nke Papu Gomez Ndị a ma ama, ndị egwuregwu ndị ọzọ ama ama Luis Muriel, Duvan Zapata na Josip Ilicic amachaghị nke ọma.
Bastoni jiri ma Atlanta na ndị otu ndị ntorobịa mba Italiantali mee ka ọnụnọ ya mara. Dị ka onye isi ụgbọ mmiri nke Italiantali, nduzi ya na ike ịgbachitere ya kpatara oke ebili mmiri na mba ahụ dum.
Nke ka mkpa bụ na omume Ale jidere anya onye nchịkwa nke Inter Milan Antonio Conte onye gbara oso ozugbo maka mbinye aka ya.
Antonio Conte enweghị ike iguzogide inwe Nnukwu Onye na-akwado ya n'akụkụ ya.
Alessandro Bastoni Biography - Bilie na-ewu ewu Akụkọ nke:
Na 31st nke August 2017, Inter Milan kwupụtara mbinye aka nke Bastoni maka € 31 nde. Iji mezue mmepe ya, Conte zigara ya Atalanta na mbido, Parma.
Ka ọ nọ na mbinye ego, Bastoni nwetara ume site na Sergio Ramos, Leonardo Bonucci na oge na-adịghị, ọkachamara ya gbanwere ya ịbụ onye agha. N'ileba anya na uto ya, Inter aghaghị icheta onye na-agbachitere ya na mbinye ego.
Dị ka n'oge edere akụkọ ndụ Allesandro Bastoni, onye na-agbachitere Nerazzurri aghọwo kọlụm ọhụrụ maka nchebe Nerazzurri.
Onye na-agbachitere hardcore emeriwo ọnọdụ mbido, na-achịkwa, n'etiti ihe ndị ọzọ, Totem na-agbachitere dịka Diego Godin.
Nbili na nbili nke Bastoni.
Site na butterflies na afọ iji nweta aha dị ka onye na-eto eto, Bastone n'enweghị obi abụọ ọ bụla, onye Italiantali na-ekwe nkwa na ọgbọ ya.
Inter Milan taa, racha afụ ọnụ ha n'ihu arụmọrụ nwata ahụ. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ndụ lesshụnanya nke Alessandro Bastoni - Nwanyị nwanyị, Nwunye?
N'azụ onye na-eme egwuregwu bọọlụ na-aga nke ọma, enwere enyi nwanyị na-adọrọ adọrọ. Onye na-agbachitere Nerazzurri bụ (n'oge ederede) na mmekọrịta ya na Martina Bulgarelli.
Ndị hụrụ bọọlụ n'anya matara enyi nwanyị Bastoni mgbe ha abụọ gara Butega del Selèr, ụlọ oriri na ọ aụ restaurantụ na agbata obi ya.
N'okpuru bụ foto nke nnukwu enyi nwanyị - Martina Bulgarelli n'akụkụ enyi ya nwoke na ndị nwe ụlọ oriri na ọegaụ Butụ Butega.
Zute Alessandro Bastoni's Girlfriend, Martina Bulgarelli (KP RR R KWES )R)). Laprovinciacr
Ọnye na-bụ Alessandro Bastoni na-abụghị Ubi?
Achọpụtaghị na onye na-agbachitere ya nwere mmụọ dị jụụ, nke dị jụụ na nke anakọtara.
N'adabere na aha ya "Ale", a na-akpọkarị onye na-agbachitere Nerazzurri 'nwa okorobịa, agadi nwoke' niile maka ntozu okè ọ na-etinye na pitch. Àgwà a emeela ka ndị fan kwenyere na 'afọ' bụ n'ezie ọnụọgụ.
Nakwa na ndụ Alessandro Bastoni, nje na-agbachitere na-ekwere na ọ dịghị ihe na-ewute ya, na naanị otu ájá zuru ezu iji mee ya obi ụtọ.
Alessandro mere ka nke a pụta ìhè mgbe ọ na-agagharị na Dubai Desert Safari.
Onye etiti na-ekwere na naanị otu ájá zuru ezu iji mee ya obi ụtọ.
Ihe omume Alessandro Bastoni:
Banyere ihe omume ntụrụndụ ya, Bastoni nke anyị nwere mmasị na Playstation na NBA. N'ihe banyere NBA, ọkacha mmasị ya basketball bụ Stephen Curry nke Golden State.
Alessandro Bastoni's Hobii bụ Bọọlụ Nkata.
Iji mara ka onye nchekwa Nerazzurri si emefu ego ya, nke mbụ, ka anyị gwa gị ihe ọ na-akpata.
Lessgwọ ọnwa Alessandro Bastoni:
Dabere na Tuttomercatoweb, ụgwọ Allesandro Bastoni bụ ihe dịka € 23,000 kwa izu na € 1.2 nde kwa oge.
Alessandro Bastoni Net bara uru na Uru Ahịa:
N'oge itinye mpempe a, Bastoni nwere ọnụ ahịa ruru nde € 1 na uru ahịa nke € 31.50m (ahịa mbufe).
Otu Bastoni si emefu Monies ya:
Onye na-echekwa etiti ga-ahọrọ itinye ego ya na football iji chekwaa Salt Bae. Ọ bataghị n'ụgbọ ala ndị na-adọrọ adọrọ, nnukwu ụlọ (ụlọ) na enyi nwanyị (nwanyị) dị egwu nke bụ ihe ngosi nke ibi ndụ okomoko.
Onye na-azụ azụ anaghị abanye n'ụgbọala kama ọ na-ahọrọ iji ego ego bọọlụ ya na Salt Bae.📷: Gym4u
Ndụ Alessandro Bastoni:
Maka ezinaụlọ Ale, enwere “Mpako Ubi”. Bọọlụ abụrụla injin nke buuru ezinụlọ Bastoni kemgbe ọtụtụ afọ. N'ịbụ onye mere ya na Serie A, Ale kwere nkwa na ọ gaghị akwụsị ikele ndị ezinụlọ m maka àjà ha mere.
N'akụkụ a, anyị ga-agwa gị gbasara ndị nne na nna Alessandro Bastoni na ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ.
Banyere ndị nne na nna Alessandro Bastoni:
Ezigbo nne na nna amịpụtala oke ụmụ nwoke na nne Ale na nna abụghị otu. Onye nkuzi bọọlụ na-amakarị Nicola na nwunye ya na-erite uru ugbu a n'inwe ọgụgụ isi dịka nwa ha nwoke.
Ghara ichefu, ọ dịka nne na nna Alessandro Bastoni nwere nwatakịrị aha ya bụ Agnese, onye ha tufuru kpamkpam na 24 nke Ọktoba, 2015. Akwụkwọ edemede mmetụta uche (n'okpuru) ga-agwa gị ihe gbasara onye otu ezinụlọ Alessandro Bastoni bụ onye na-egbu oge ugbu a. Jiri obiọma gụọ site n'aka ekpe gaa n'aka nri.
Ihe edeturu site na onye ị hụrụ n'anya nwụnahụrụ gị.
Nke a bụ ama nke abụọ nke mmetụta uche sitere na Ale banyere nwanne onye otu - nwanne ya nwanyị.
Banyere Nwanna Alessandro Bastoni:
A mụrụ nwanne okenye Ale, Luca Bastoni na 1995. Nkwupụta a na-egosi na ọ dị afọ anọ karịa ya.
Dị ka n'oge ederede, nwa mbụ nke ezinụlọ Alessandro Bastoni (Luca) na otu egwuregwu na Mantua na-egwu bọl. O di nwute, nnukwu nwanne nwoke kuziri nwanne ya nwoke bọọlụ emeghi ya dika Alessandro mere.
Zute Nwanna Alessandro Bastoni Luca.
N'etiti ụmụnne abụọ a, ọ bụ Alessandro bụ onye pụta dị ka onye na-ahụ maka ezinụlọ Bastoni nwere ekele na ya ruru ebumnuche kachasị mma nke onye ọ bụla na-eto eto Italiantali ọ bụla (na-egwu egwuregwu na Serie A).
Banyere Nwanne nwanyị nke Alessandro Bastoni:
Ejiri azụ ụkwụ aka ekpe toro n'ezinụlọ 5 ma nwee ụmụnne abụọ, gụnyere nwanne nwanyị aha ya bụ Michela.
Ndị nne na nna Alessandro Bastoni nwere ya dị ka nwa ikpeazụ a mụrụ aka nwa nke ụlọ. Michela bụ onye na-achọ foto na onye nwe blog a ma ama - “Mkpokọta AuwalWithoutFilters.Travel.Blog"
Banyere ndị Alessandro Bastoni:
Ọbụna ruo taa, ncheta nke enyemaka Ale nyere ndị nne na nna ochie n'oge ọ bụ nwata ka na-adịgide.
Dị ka nwatakịrị, ọ na-eji oge ezumike ya enyere nne na nna ya ochie aka n'ịkọ ala ha. Lee okwu Alessandro Bastoni banyere ịrụ ọrụ na ya Ulo akwukwo nri ndi nne na nna ochie dika Gianlucadimarzio si di;
Dika nwatakiri, enwere m obi uto ichota ihe ohuru, agara m ubi ka m were tomato, ma n'eziokwu, ana m eme ihe ojoo karia ihe obula n'ihi na nne na nna m ochie akuru ubi. "
Alessandro Bastoni Na-ekwu Eziokwu:
Eziokwu # 1- Gini mere o jiri eyi Ee: 95 na Jersey ya
Ikekwe ị maghị na, Nerazzurri etiti azụ na - ebu ọnụ ọgụgụ ahụ n'ihi nkwa o kwere nwanne ya nwoke (Luca) n'oge ọ gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ntorobịa nke Atlanta.
Ale kwenyere na ọ gaghị adị dị ka ndị ịgba egwu ma ọ bụrụ na Luca egosighi ya ụzọ. Na-ekwu okwu na nyochaa football, etiti ahụ kwuru ozugbo;
"Agwara m ya na nọmba uwe m ga-abụ afọ ọmụmụ ya- 95. aringgba nọmba a bụ ụzọ nke Luca na ndị ezinụlọ m ndị ọzọ soro m nọ na pitch."
Eziokwu # 2- Alessandro Bastoni Football arụsị:
Ndị na - ahụ n'anya na - ahụ n'anya, Ben Chilwell, Niklas Süle, Ibrahima Konate na Daniele Rugani ha nile nwere ezi ihe nlere. Bastoni nke anyị bụ ezigbo onye Real Madrid, onye na-enwe mmasị ma na-ahụ Sergio Ramos dị ka onye nlereanya ya. N'ikwu okwu banyere mmasị ya, onye na-agbachitere kwuru otu oge;
Enwere m mmasị na Sergio Ramos nke ukwuu, ọ bụghị onye agbachitere ọhụụ nke na-agbachitere ma ọ dịghị ihe ọ bụla. Ọ mara oke mma na bọọlụ. Achọrọ m ịdị ka ya dị mma ọ bụrụgodị na ọ gaghị ekwe omume iru ọkwa ya. ”
Eziokwu # 3- Alessandro Bastoni Tattoos:
Nke mbu, akuko Alessandro Bastoni bu nwata gosiputara nke oma na udiri aka ya.
Onye na-agbachitere ogologo nwekwara akara ndị ọzọ, nke mbụ bụ ọdụm, nke ọzọ bụ elekere na n'ikpeazụ, ifuru. Imirikiti egbugbu Alessandro Bastoni bụ nke Elo Tattoo Art Studio tinyere na 2018 nke dị na Travagliato, Italy.
Eziokwu # 3- Alessandro Bastoni rygwọ ụgwọ ọnwa:
N'oge Antonio Conte mere ka nkwekọrịta ya dị ọhụrụ, onye na-agbachitere becametali ghọrọ onye a gọziri agọzi site na nchikota ego nke € 23,000 kwa izu na ụgwọ nde kwa afọ million 1.2
Anyị ejirila oge anyị gụpụ ụgwọ ụgwọ Alessandro Bastoni na ọnụọgụ, nke a na-ekpughe ihe ọ na-enweta kwa afọ, ọnwa, izu, ụbọchị, oge, nkeji na sekọnd.
Na Euro (€)
Na ego (£)
Na dollar ($)
Kwa Afọ: € 1,200,000 £ 1,055,713 $ 1,314,780
Ọnwa kwa: € 100,000 £ 87,976 $ 109,565
Kwa Izu: € 23,226 £ 20,271 $ 25,245
Kwa :bọchị: € 3,222 £ 2,896 $ 3,606
Kwa elekere: € 134 £ 121 $ 150
Nkeji nkeji: € 2.24 £ 2 $ 2.5
Sekọnd: € 0.04 £ 0.03 $ 0.04
Dabere na ụgwọ ọnwa ụgwọ ọnwa, nke a bụ ihe Alessandro Bastoni rụpụtala ọrụ kemgbe gị bidoro na-elele Peeji a.
Chaị! You maara? In Nwoke ọ bụla nọ n'Italytali na-akpata ihe dị ka 3,680 EUR kwa ọnwa ga-arụ ọrụ opekata mpe afọ abụọ na izu atọ iji mee ọnwa naanị ụgwọ ọnwa Alessandro Bastoni.
Alessandro Bastoni Biography- data Wiki
Aha n'uju Alessandro Bastoni
A mụrụ: 13 April 1999
Age: 21 (dị ka Mee n’afọ 2020)
Ndị nne na nna: Mr na Mrs Nicola Bastoni
Nwanna: Luca Bastoni
Nwanna nwanyị: Michela Bastoni
enyi nwanyị Martina Bulgarelli
Ogo n'ogo 6 ụkwụ 3 sentimita
Ogo na igwe elekere 1.91 m
Net bara uru € 1 nde
omume ntụrụndụ Bọọlụ Nkata (Nkata egwuregwu)
Daalụ maka ịgụ ọzọ akụkọ nwata na biography, oge a, nke Alessandro Bastoni. Ndị editọ anyị na LifeBogger gbalịsie ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ na usoro a na - emebu nke ide akụkọ ndị ntorobịa na ndị na - agba ọsọ ndụ.
Jiri obi ọma kpọtụrụ anyị ma ọ bụ tinye okwu ma ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a na akụkọ Alessandro Bastoni nke nwata na akụkọ ndụ ya. Ma ọ bụghị ya, gwa anyị na ngalaba nkọwa ihe ị chere gbasara ihe anyị na-ede na ndị ịgba egwu bọọlụ.